Nagarik Shukrabar - फिजियोथेरापीका पक्षहरू
सोमबार, ०६ साउन २०७६, ०३ : ५०
आइतबार, १६ साउन २०७३, १२ : १९ | विवेक घिमिरे ‘विशद’ , Kathmandu
फिजियोथेरापी हेल्थ केयर प्रोफेसन हो । प्राथमिक तहमा अपांगता, शारीरिक हानि (इम्पेरमेन्ट) सँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई निदान, परीक्षण र मूल्यांकनका माध्यमबाट गतिशील बनाई कार्यात्मक क्षमता बढाउन सक्नु यस विधिको उद्देश्य हो । बिरामीलाई यथोचित विधिबाट गुणस्तरीय जीवनमा उतार्नु यस उपचार विधिको दायित्व हो । यस विधिको विशेषता विविध छन् । कुन अवस्थाबाट पीडित व्यक्ति हो र उसको हालको अवस्था कस्तो छ, त्यसको राम्ररी पहिचान गरेर मात्र उपचारको उपाय अपनाउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा प्रतिकूल प्रभाव पर्न पनि सक्ने हुँदा थेरापिस्टले यसमा निकै विचार पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । अशक्तलाई सशक्त पार्न अभ्यस्त अभ्यासको आवश्यक पर्दछ फिजियोथेरापीमा ।
फिजियोथेरापी चिकित्सा विधि सामान्यगत रूपमा नभई व्यक्तिगत रूपमा फरकफरक हुन्छन् । कुनै पनि रोगका लक्षण व्यक्तिअनुसार फरक हुने भएकाले नै व्यक्तिगत रूपमा मूल्यांकन, परीक्षण तथा निदान गरेर मात्रै उपचार पद्धतिको विधि रोज्नुपर्ने हुन्छ । एउटै प्रकृतिको रोग भए पनि सबैलाई एउटै तरिकाले अभ्यास गराउन नमिल्ने पनि हुन्छ । कुनै पनि उपचार बिरामीको अवस्था नहेरी गर्नाले प्रतिकूल प्रभाव पर्ने हुँदा यसमा थेरापिस्टको दक्षता र कार्यकुशलताको जरुरी पर्दछ । शारीरिक शक्ति बढाउनु, शारीरिक समन्वयको विकास गर्नु, गतिशीलताको प्रवद्र्धन गराउनु, क्रियाशील क्षमताको विकास गराउनु फिजियोथेरापिस्टहरूको दायित्व हो । कुनै पनि रोगको उपचारमा एक विधाका स्वास्थ्य व्यवसायीमात्र संलग्न भई उपचार निर्धारण गर्नुभन्दा विभिन्न पक्षका स्वास्थ्य व्यवसायी बीचको सहकार्यबाट निर्धारण गरिएको उपचार विधि सार्थक र प्रभावकारी हुने गरेको छ । एउटा रोगको उपचार गर्दा अर्को रोगमा आघात पार्न नपाओस् भन्ने हेतुले यसो गरिन्छ ।
कस्ता रोगका लागि फिजियोथेरापी सेवा ?
# मांसपेशी एवं हड्डीका विभिन्न रोगका लागि
# विभिन्न पेशाका कारण हुने चोटपटक
# खेलकुदमा हुने चोटपटक, जस्तैः लिगामेन्ट इन्जुरीहरू ।
# रोग र उमेरका कारणले हिँडडुल गर्न समेत नसक्नेहरू ।
# डिजेनेरेटिभ डिसअर्डर्स, जस्तैः आर्थराइटिसका रोगीहरू,
पार्किन्सन्स डिजिज, स्ट्रोक, मल्टिपल स्क्लेरोसिस, मेरुदण्डको चोट भएका
# मुटु तथा फोक्सोका रोग, जस्तैः आस्थमा, हार्ट फेलियर
# महिला स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्या
# डायबिटिज, उच्च रक्तचाप, ओस्टियोपोरोसिस, ढाड दुखाइ आदिका रोगीहरू
# मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित शारीरिक असक्षमता भएकाहरू
# नवजात शिशुमा देखिएका मस्तिष्क पक्षघात, डाउन्स सिन्ड्रोम, शारीरिक विकासमा आएको सुस्तता आदिमा फिजियोथेरापी उपचार अपरिहार्य हुन्छ ।
फिजियोथेरापी चिकित्साको कार्यक्षेत्र अस्पतालमा मात्र सीमित नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै आवश्यक छ । विशेष गरी यसको कार्यक्षेत्र हस्पिटल, इन्डस्ट्री तथा समाज जहाँ जुन अवस्थामा पनि हुनसक्छ । इन्डस्ट्रीमा फिजियोथेरापी अभ्यास विकसित राष्ट्रहरूमा मात्र देखिएको छ । विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा यसको महŒवको जनचेतना आवश्यक छ । आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा थेरापी विधिलाई विश्वका प्रायः सबै मुलुकले अपनाउँदै आएको अभ्यास विधि भएकाले हाम्रो समाजका हरेक क्षेत्र र गाउँमा यसको प्रचार र प्रयोग पु¥याउनु आवश्यक देखिन्छ ।
विषादीबाट बच्ने उपाय
हाम्रो भान्सामा तरकारी फलफूलसँगै विषादी पनि भित्रन्छ भन्ने विषय अब नौलो भएन। विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको भान्सामा तरकारी र फलफूलसँगै विषादी भित्रिने जोखिम बढी देखिन्छ।
खै कसरी फँसे, के भनौँ र ?
जीवनमा मैले ठूलोठूलो उद्देश्य लिएकी थिएँ। सपनाको राजकुमार कल्पेकी थिएँ। त्यसैले हत्तपत्त म कसैलाई पनि भाउ दिन्न थिएँ। फेसबुकमा जस्तो पायो त्यस्तै मान्छेलाई मैले भाउ नदिने भएकाले कम साथी थिए।
यस्तो बेलामा यौन सम्बन्ध नराखौं
स्तनपान गराएको समयमा आमाका लागि अन्य विषय गौण हुन्छ। यौनजन्य काम गौण हुन सक्छ। शिशुलाई स्तनपान गराइरहेको समयमा कुनै पुरुषले महिलालाई यौनका लागि प्रस्ताव गरे त्यस्ता पुरुषप्रति महिलाको वितृष्णा जाग्न सक्छ।
अचेल किन टाढिएको ?
मसँग जिन्दगी बिताउँदा खुसी हुन्छुजस्तो लाग्दैन भने मलाई सिधै भन । मायामा पाउनु पर्छ भन्ने मात्र छैन, गुमाउनु पनि माया नै हो । तिम्रो लागि भनेर मैले सबैथोक छाडेँ तर किन आज तिमीले मलाई मर्नु न बाँच्नु बनाएको हो ?